जब स्टालिनले भने- गद्धारी गर्नुभन्दा त याकोव मरेकै बेस, उसलाई मर्न दिनुस् - Everest Dainik - News from Nepal
जब स्टालिनले भने- गद्धारी गर्नुभन्दा त याकोव मरेकै बेस, उसलाई मर्न दिनुस्
जर्मनहरुले युद्धमोर्चामा रहेका स्टालिनका छोरालाई पक्राउ गरे । उनलाई स्टालिनविरुद्ध प्रयोग गर्न प्रलोभन दिए तर सकेनन् । अनि रिहाईका बदलामा जर्मन बन्दी सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखे । तर स्टालिनले भने– यो गद्धारी हुनेछ, मातृभूमिका लागि गद्धारी । बरु मेरो छोरालाई मर्न दिनुस् ।
याकोभ जुगसभीली, अर्थात् चर्चित कम्युनिष्ट नेता स्टालिनका छोरा । रुस र जर्मनसँगको युद्धको बेला अग्रमोर्चामा उभिएका याकोभ जर्मन सेनाको कब्जामा परे । त्यतिबेला जर्मनहरुले याकोबलगायतका सैन्य समूहले आत्मसमर्पण गरेको प्रचार गरेका थिए ।
गाउँमा नै छँदा बिहे गरेका स्टालिनले छोराको बालपनसँग समय बिताउन भने सकेनन् । याकोब भने १४ वर्ष पुगिसकेका थिए । र, पहिलोपटक सन् १९२१ मा जर्जियाबाट उनको परिवार मस्को गएपछि कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिमा सक्रिय आफ्ना बुवा स्टालिनसँग उनले भेटे ।
बुवा र छोराको सम्बन्ध राम्रै थियो । तर याकेबले बिहे गरेको कुरा भने स्टालिनलाई मन परेको थिएन । यही बीचमा याकोबको नाबालिक छोरीको मृत्यु भयो । भावुक याकोबले गोली हानेर आफूलाई मार्न खोजेपनि क्रेमलिनका चिकित्सकहरुले उनलाई बचाए ।
तर राजनीतिकरुपमा भने याकोब र स्टालिनको कहिल्यै मतभेद भएन । राष्ट्र र क्रान्तिप्रति वफादार रहेका पेशाले इन्जिनियर याकोबले रेड आर्मी आर्टिलरी एकेडमी प्रवेश गरे । सन् १९४१ मा जर्मन र रुसको युद्द चर्केको बेला उनी सेनामा सिनियर लेफ्टीनेन्ट थिए । र, उनलाई एउटा युनिटको कमाण्डरको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस के स्टालिनको हत्या भएको थियो, पढ्नुस गुप्त दस्तावेजको खुलासा
स्टालिन त्यतिबेला रुसका सबैभन्दा शक्तिशाली नायक थिए । रुसमात्रै किन संसारमैं स्टालिन भनेपछि थुरुथुरु काँप्नेहरु धेरै थिए । लेनिनका पाइला पछ्याउँदै शक्तिशाली सोभियत संघको निर्माण गर्न सफल स्टालिनको व्यक्तिगत जीवन भने स्वार्थरहित थियो ।
जर्मनहरुले आक्रमण गरेपछि स्टालिनले उनको छोरालाई आदेश दिए– जाउ र लड ।
स्टालिनलाई राम्रैसँग थाहा थियो, उनका छोरा मर्न पनि सक्छन् ।
र, याकोब पनि युद्दको अग्रमोर्चामा कमाण्ड गर्न हिँडे । बेलारुसको मोर्चामा खटिएको उनी मातहतको सेना कब्जामा पर्यो । याकोबलाई युद्धबन्दी बनाइयो ।
छिट्टै नै जर्मनहरुले आफ्नो जालमा ठूलै माछा परेको चाल पाए । स्टालिनका छोरा पक्राउ पर्नु भनेको युद्ध जितेसरह नै थियो । त्यसैले शुरुका दिनमा उनीहरुले याकोबमाथि अत्याचार गरेनन् । बरु याकोबलाई स्टालिनविरुद्ध उभ्याउने कोशिस गरे । प्रोपोगाण्डा नै फैलाइयो– सिनियर स्टालिनविरुद्ध जुनियर स्टालिन ।
जर्मनहरुले याकोबले आफुखुसी आत्मसमर्पण गरेको प्रचार गरे । शुरुमा त स्टालिन पनि हो कि ? भन्न पुगे । तर क्रेमलिनले यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्दा वास्तविकता थाहा भयो । स्टालिनलाई आफ्नो छोरा गद्धार नभएकोमा ढुक्क भए । त्यसपछि सैन्य अधिकारीहरुले याकोबलाई फिर्ता ल्याउन कोशिस शुरु गरे ।
याे पनि पढ्नुस स्टालिनको अन्तिम भासण ( भिडियो)
तर स्टालिनले यो थाहा पाएपछि भने– युद्ध भनेको युद्ध हो, त्यहाँ व्यक्तिगत सम्बन्धको अर्थ हुन्न ।
उता जर्मनहरुको कब्जामा रहेका याकोबलाई जति राम्रो व्यवहार गरेपनि उनीबाट कुनै सूचना भने पाउन सकिएन । जर्मनहरुले सोधपुछ गर्दा याकोबको जवाफ थियो– युद्धमोर्चामा जितेर फर्किनु मेरो बुवा र देशका लागि गर्व हुनेछ, तर युद्ध नजिती बाँच्नु मरेसरह नै हो । मबाट तिमीहरु केही पाउँदैनौं । बरु मार्दिनु, मलाई गर्व हुनेछ ।
स्टालिनग्राडको युद्धपछि जर्मनहरुले याकोबलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै स्टालिनको छोरालाई रिहाई गर्न सकिने तर त्यसको बदलामा रुसले आफ्ना सैनिकलाई समेत रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । स्वीडिस डिप्लोम्याट काउन्ट फाक बर्नाडोटले यसको मध्यस्थता गरे । जर्मनले याकोबको बदलामा फिल्ड मार्सल फ्रेडरिख पौलस र उच्च पदस्थ ६ जना सेनाका अधिकारीको रिहाईको शर्त राखे ।
यो प्रस्ताव आएपछि स्टालिनले के सोचे होलान् भन्न कठिन छ । स्टालिनका अगाडि एकातिर छोराको जीवन थियो अर्कोतर्फ राष्ट्रको इज्जत । तर उनले जर्मनहरुको प्रस्तावमा ठाडो जवाफ दिए– म एकजना सिपाहीको बदलामा फिल्ड मार्सललाई रिहाई गर्न सक्दिन ।
स्टालिनकी छोरी स्वेतलाना एलिल्यूभाले उक्त घटनाको बारेमा लेखेकी छिन् । सन् १९४३, ४४ को हिउँद ताका स्टालिनले स्वेतलानालाई यसबारेमा चर्चा गरेको सम्झिंदै उनले लेखकी छिन्, “जर्मनहरुले याशा (याकोब)लाई फिर्ता गर्न उनीहरुका केही मानिस रिहा गर्न प्रस्ताव गरेका छन्…के मैले उनीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने त ? अहँ, मबाट यो हुनसक्दैन । युद्ध भनेको युद्ध हो ।”
मार्शल जुकोभले आफ्नो संस्मरणमा यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् । “हामीहरु हिंडदै गइरहेको बेला मैले स्टालिनलाई उनको जेठो छोराको बारेमा कुरा गरे । तर स्टालिनले रुखो जवाफ दिए– याकोब हिरासतबाट मुक्त हुँदैन । फासीवाीहरुले उसलाई मार्नेछन् …। एकपछि रोकिँदै स्टालिनले फेरी भने– अहँ मातृभूमिप्रति गद्धारी गर्नुभन्दा त याकोब मरेकै बेस, उसलाई मर्न दिनुस् ।”
परिवारवाद भन्दा निकै माथि उठेका स्टालिनको यो निर्देशनको कतिपयले आलोचना पनि गरे । तर जर्मनहरुका अनैतिक माग मान्नुको साटो स्टालिनले आफ्नो छोरालाई हिरासतमा नै रहन दिए ।
अप्रिल १४, १९४३ का दिन । जेलमा रहेका याकोबले स्यासेन्होसेन बन्दी क्याम्पमा रहेको बेला बिजुलीको तार समाते । आगलागी हुने अवस्था देखेपछि तत्कालै गार्डले याकोबमाथि गोली चलाए । याकोबको त्यहीँ मृत्यु भयो । याकोबले आत्महत्या गर्न खोजेका थिए या जेलबाट भाग्ने योजनास्वरुप तार समातेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म रहस्यकै विषय बनेको छ ।
गोकर्ण भट्ट ।/एजेन्सीहरुको सहयोगमा
ट्याग्स: Stalin, Yakov and Stalin, याकाेभ, स्टालिन